Ogaden News Agency (ONA) – ”Baro taariikhdaada si aad u Ogaato waxa aad tahay” – Dr.Mohamud Ugaas
”Baro taariikhdaada si aad u Ogaato waxa aad tahay” – Dr.Mohamud Ugaas
Posted by ONA Admin	/ October 27, 2012
Oslo-Ciida Carafo oo hawsheedu badnayd inay tahay iyo qabow daran oo kajiray dhulka aan ku noolahay oo yareeyey isu socodkii dadka awgii, ayaan go’aan saday inaan dib ugu laabto guriga aan daganaa gelinkii dambe ee maanta, aniga oo niyada ku hayey inaan shaashadaha aduunka kala socdo wixii ugu dambeeyey ee warar ah. Waxaana furtay shabakadda sida joogtada ah aan u booqdo ee Ogadennet, anigoo webkan gudihiisa-na ka dhex daawada TV-ga Ilays oo ah mid asbuucii soo gala laba mar. TV-ga Ilays ayaa ah kan kaliyee soo tabiya wararka gudaha Ogadenia, islamarkaasna wariyayaashiisu toos wararka uga soo diraan Jiidahaa hore ee dagaalka u dhaxeeta Jabhadda Wadaniga ee ONLF iyo maleeshiyaadka TPLF ee xooga ku jooga wadanka Ogadenia.
Markaan daawaday warkii iyo hambalyadii Gudoomiyaha Jabhadda ONLF, Admiral Mohamed Omar Osman, u diray farxadda ciida carrafo shacabkiisa iyo ummadaha Islaamka ee ku dhaqan aduunka, ayaan furtay barnaamij gaar ah oo Wariye Shugri, ku sheegtay in laga soo diyaariyey shir Jaaliyadda Kenya qabatay horaantii bishan. Kulankaas oo ay soo xaadireen dadweyn badan oo isugu jiray Odayaal dhaqmeedyo, Dhalinyaro, Hooyooyin, Culimaa’udiin, Siyaasiyiin iyo Aqoonyahano, uu kamid ah Dr. Mohamed Ugaas. Dr. Mohamud ayaa ayaa madasha shirka ku soo bandhigay cilmi-baadhis uu kasoo diyaariyey dhulka Ogadenia.
Dr. M. Ugaas wuxuu warbixintiisa ku bilaabay qodobo dhawra uu ku sheegay inay gundhig u yihiin baadhista uu ku sameeyey Ogadenia, isagoo sheegay sida uu u jecel inuu dadweynaha la wadaago sharaxaada qodobadan hoos ku xusan iyo waliba faah-faahintoodaba,waxa uuna u kala dhigay:-
1-Qaabka aduunku u arko Ogadenia iyo Itoobiya , hadday ahaan lahayd xag dhuleed,xag dhaqaale iyo mid siyaasadeed ba.
2– Isbarbardhiga khayraadka kujira Ogadenia iyo wadamadda ka hooseeya saxaraha Afrika( sub-saharan countries).
3-Dhibaatooyinka ay keentay xukuumadda EPRDF/TPLF iyo sida ay u tir-tirtay xeer-dhaqameedkii aasaasiga ahaa.
4– Xaaladda Siyaasadeed ee Geeska Africa , tan ku saabsan wada hadalka ONLF iyo Itoobiya iyo dardaaran iyo talo uu sheegay inuu ku soo gunaanadi doono cilmi-baadhista uu sameeyey.
1-Aduunku siduu u arko Ogadenia iyo Itoobiya!
Haddii aan ku horeyno sida aduunku u arko dhulka Ogadenia iyo khayraadkiisa, Diktoorka ayaa warbixintiisa ku bilaabay qoraal uu ka tagay bad-mareen 100 sano kahor maray dhulka Ogadenia oo la odhan jiray Artan Raymon. Mr. Raymon oo tilmaamayey xiligaas Ogadenia iyo bulshadda dagan meesha uu maray ayaa yiri ” Dadka dagan Ogadenia waxay isugu jiraan beeraleey iyo reer miyi dhaqda xoolaha, fardaha iyo Goroyadda” oo uu raacshay bad-mareenku inaysan jirin taariikhda Aadamaha meel ay taalo badeeco saas u badan, isagoo ku gatay lacag dhawr boqol oo doollar xoolo aad u badan oo aanay jirin meel lamid ah. Dr. Mohamud ayaa sheegay in arinta ninkani ka hadlay qarni kahor markhaati cad u tahay in dalkani (Ogadenia) ahaa wadan madax-banaan oo aanay cidi gumeysanin, islamarkaasna lahaa khayraad iyo hab-ganacsi u gooni ahaa.
Dhanka kale, Diktoorka ayaa soo xigtay warbixin tilmaamaysay sida Caalamku u arko Itoobiya 2050-ka, taasoo u qoray madaxa Bangiga aduunka u qaabilsanaa Itoobiya iyo wadamada deeqaha baxsha. Xogtan oo uu soo saaray Bangiga aduunka (World Bank), ayaa sheegtay in tiradda dadka Itoobiya gaadhi doonto sanadka 2050, wax kabadan 150 milyan, taas oo muujinaysa kororsiimo dhan 50-60 milyan, tiradan oo ka dhigi doonta Itoobiya wadan aan daganeyn (unsustainable country). Qoraalka bangiga aduunka daabacay isagoo sii sharxaya ayuu yiri Dr. Mohamed; ”Xaaladda dadka daga buuraleyda sare ee Itoobiya waa mid aan daganayn, waxaa jira nabaad-guur ku dhacay dhulkii beeraleyda, waxaan jirin carro nafaqo leh, geedo iyo dhir toona”.
Dr.Mohamud ayaa isbar-bardhig kusameeyey labada war-bixinood ee sare ee midba dhankeeda uga faalootay sida ay u arkaan dalalka Ogadenia iyo Itoobiya, isagoo yiri ” Waxaynu u jeednaa in wadan (Itoobiya) yahay mid nabaad-guuray oo caydh 80-tan million ahi ku nooshahay, halka wadanna (Ogadenia) yahay dal qani ah oo khayraad badan leh”.
Wuxuuna intaas raacshay in Bangiga aduunku Itoobiya kula taliyey inay dejiyaan dadkooda dhulka dihin ee Ogadenia si ay uga badbaadaan musiibadda kusoo foodleh mustaqbalka, mashruucaas oo buu yiri Diktoorku ku dhamaaday fashil iyo guul-darro markii shacabka Ogadenia qori caaradii kala hortagay.
Diktoorka ayaa aad ugu dheeraaday ka sheekeynta khayraadka dhulka Ogadenia, isagoo sheegay inuu uga dan leeyahay warbixintiisa inuu ku beeniyo dacaayadda Itoobiya ka faafiso dhulkeena oo ay ku sheegaan inuu yahay saxare lama-dagaan ah. Wuxuuna yiri ” …boqol kiiba shan wax ka yar ayaa la odhan karaa waa lama dagaan, waliba meesha aan sidaas leeyahay roobku sanadkii waxa uu helaa in gaadhaysa 550 mm”.
2- Isbarbardhiga khayraadka kujira Ogadenia iyo wadamadda ka hooseeya Saxaraha Afrika( sub-saharan countries)!
Mar uu Diktoorku sharaxaad ka bixinayey shidaalka la qiyaasayo inuu ceegaagan yahay meel uu ku tilmaamay dhulka u dhaxeeya saddex-xagalka Wardheer-Hargeele-Coballe, ayuu ku sheegay inuu dhan yahay 30kun oo Trillion oo Meter Cubic, isagoo dadkii goobta fadhiyey si kaftan ah ugu sheegay inaysan badanaaba dhagahoodu qabanin tirada Trillion iyo inta ay la eg tahay ba. Dr. Mohamud ayaa sheegay in khayraadka shidaal iyo duunyo ee ugu badan wadamada Saxaraha ka hooseeya ( sub-saharan countries), ay kujiraan dhulka Ogadenia lagana heli karo, sababtaasna weeyaan buu yiri tan keentay in boqolaal shirkadood oo shidaalka baadha malwalba ugu yaacayaan Ogadenia.
Wuxuuna isweydiiyey waxa ku kalifi kara wadanka Panama, oo ah dal faqri ah oon lahayn ilo-dhaqaale oo aan ka ahayn marin-biyood, inay Millions ku bixiyaan baadhis shidaal oo Ogadenia lagu sameeyo, midaas oo cadeynaysa baaxada uu la eg yahay kayd shidaal ee kujira dalkeena.
3-Dhibaatooyinka ay keentay xukuumadda EPRDF/TPLF iyo sida ay u tirtirtay xeer-dhaqameedkii aasaasiga ahaa.
Dr. Mohamud Ugaas ayaa dib ugu laabtay taariikhda mugdiga ah ee ururka EPRDF/TPLF, iyo qaabkii gurracnaa ee ay ula dhaqmeen maamuladii hore iyo siday uga horyimaadeen rabitaanka shacabka Ogadenia, midaas oo keentay inay Woyaanuhu tirtiraan ”xeer-dhaqameedkii wadashaqeynta” oo qeexayey in shacabku iska soo dhisaan salka oo aan korka go’aamo taabanaya noloshooda lagaga soo waaridin (bottom-up system).
”Xeer-dhaqameedka wada-shaqeynta ayaa odhanayey in degmo walba soo diyaarsato qorshaheeda horumarineed, una soo gudbiso heer gobol ilaa heer sare, arintan oo markii aan u gudbinay heer federal keentay in xabsiga la ii taxaabo muddo 7-bilood ah, waxayna sababtay in dusha la nooga keeno askari Tigree ah oo Cumaamad xidhan (qosol iyo sacab), walibana sheeganaya inuu soo halgamay!” ayuu yiri Dr. Mohamud Ugaas oo intaas raacshay in wixii intaas ka dambeeyey Itoobiya ay heshay magac aanay cidi la wadaagin kaas oo ah; dal leh ”xukun mayal adag oo macangag ah”.( State of Absolute, Military,Dictatorship).
Wuxuu sheegay in faragelin dhan walba ah EPRDF/TPLF ku sameeysay maamuladii jiray kahor intii aysan bixin Jabhadda ONLF, kuwaas isugu jiray faragelin xagga maamulka, amaanka, abuurista ururo qabiileedyo kahor doorashadii , xidh-xidhidda gudiyadii nabad-galyadda, hakinta 10 mashruuc horumarineed oo deegaanka ka socday, dilka 8-eed duq magaalo, muran-gelinta magaalooyinka xadka mara iyo caasimadii oo laga soo raray magaalada Dire-Dawa iyo xasuuqii Wardheer oo keenay dambeyntii in Jabhadu qoriga qaado.